Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY INTY SY NDAY: Niova tokoa izao tontolo izao !
Niova tokoa izao tontolo izao, raha izany. Ny filoha Emmanuel Macron moa dia nanangana firehana vaovao nampisalorany ny anarana hoe «En Marche». Somary mirona amin’ny foto-kevitra ankavia izy, saingy tompon’antoka koa amin’ny fampiharana ny
« fanontotoloana gaboraraka » (mondialisation sauvage), izay manome vahana an’ireo mpanana.
Ny mahavariana dia ny faharesen-dahatry ny maro an’isa tamin’ireo vahoaka frantsay nisafidy olona tsy nanana rafitra pôlitika (antoko) toa an’i Emmanuel Macron, ka izao izy miantsampy amin’ny sokajin’olona isan-karazany izay nanohana azy izao.
Izao moa ny any Frantsa vao miroso amin’ny raharaha toa izany fa ny teto amintsika teto Madagasikara manokana dia nandritra ny 57 taona izao no nahitana rafi-pitondram-panjakana nirafitra tamin’ny fomba mampihomehy. Ireo sokajin’olona tsy fanta-piaviana ara-pôlitika rehetra izao no notendrena nandrafitra ny governemanta teto, ka izany no nahatonga ny fivadibadihana palitao.
Io koa fa nanara-dia an’izany i Frantsa ka hatramin’ny olona tany anivon’ny firaisa-monim-pirenena no nalaina handrafitra ny governemanta. Tsy tokony hadinoina anefa fa ara-pamaritana (par définition), ny firaisamonim-pirenena dia tsy mba isan’ny sokajin’olona miandrandra toerana ara-pôlitika toa ny minisitra ? Teto amintsika no nahitana izany satria olona avy any amin’ny « Kmf Cnoe », ohatra, no lasa minisitra. Olona avy amin’ny sendika Seces no lasa minisitra.
Ekena ary marina fa tsy mitovy ny any Frantsa sy ny eto Madagasikara, saingy ny tian-kivoitra dia ny toa fahaverezan’ny hasin’ny antsoina hoe « antoko pôlitika ».
Tsy fahafinaretana anefa no ilazana izany fa tahotra satria ny antoko pôlitika no rafitra tokony hitantana raharaham-panjakana, ka raha mpitondra fanjakana tsy manana antoko pôlitika matanjaka sy tsara rafitra ary manana foto-kevitra pôlitika mafy orina, raha antoko pôlitika miorina araka ny fitsokan’ny rivotra fotsiny, dia tsy ahitam-pahombiazana rehefa tonga eo amin’ny fitantanana ny fahefam-panjakana.
Dia samia isika manara-maso fa antoko pôlitika manana rafitra sy foto-kevitra matotra, manana fomba fiasa hentitra sy fandaminana maty paika aza, sahirana vao mahafehy fanjakana, mainka fa fitondram-panjakana miorina amin’ny sokajin’olona « notsimpontsimponina » tetsy sy teroa !